Puntland: Baaq ku aadan Dhowrista xuquuqda Muhaajiriinta
Kulan aqoon isweydaarsi ah oo ka dhacay magaalada Garowe ayaa laga soo saaray baaq ku aadan dhowrista xuquuqda dadka Muhaajiriinta ah.
Maamulka Puntland iyo shacabka ayaa loogu baaqay inay ilaaliyaan xuquuqda dadka muhaajiriinta ah iyo kuwa qaxa ku yimid deegaanada Puntland.
Kulan aqoon isweydaarsi ah oo labo maalmood ka socday Puntland, kaasoo shalay lagu soo gabagabeeyay magalaada Garowe ayaa laga soo saaray dhowr qodob oo ay ka mid yihiin, Dhowrista dadka tahriibka ah, inaan si khasab ah lagu tarxiilin dadka qaxa ku yimid Puntland haddii aanay dambi gelin iyo in tallaabo laga qaado kuwa tahriibka daadgureeya, hase yeeshee aan dhibna loo geysan dadka tahriibayaasha.
Waxaa kaloo lagu baaqay in wacyigelin loo sameeyo bulshada si ay u ilaaliyaan xuquuqda dadyowga kala duwan ee ku soo qaxay Puntland.
Kulankaasi aqoon isweydaarsiga ah oo labo maalmood ka socday magaalada Garowe waxaa si wadajir ah uga qeybgalay xubno ka socda xukuumadda Puntland, laamaha amniga, ururada dhalinyarada, waxgaradka, culimada iyo haweenka.
Cabdi Faarax oo ka socday NGO-ga UNGAM ayaa sheegay in ujeedada loo qabtay aqoon isweydaarsigan ay tahay sidii bulshada iyo maamulka laysla qaadan lahaa in laga hortago dhibaatooyinka soo wajaha dadka socotada ah.
Waxayna dhammaantood isla qaateen sida ay u haboon tahay inaan sharciga laga tallaabsan, xuquuqda dadka aan waxba galabsanna la ilaaliyo.